Jaalala Archives - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Jaalala
Lameen woljaalatan gargar bayuun dubartii irra hubaatii sammuufi qaamaa cimaa geessa
Admin - Aug 10, 2015
Admin - Jul 13, 2015
Ijoolleen lakkuun abbaa lama irraa dhalachuun isaanii mirkanaaye
Admin - Feb 25, 2015 0
Jaalachuun, jaalalaan qabamuun hundi adeemsa jireenyaa ilma namaati. Jaalanna, waan barbaannu harkatti galfachuuf tattaafanna. Dhumarratti hangi tokko itti milkoofna. Kan jaalatu hundi wan jaalatu...
Jalala nama tokkoof qabnu ibsuun dirqama. Dubbachuun, jechootaan ibsachuun daandii tokko. Ta’us hundaa miti kan onnee godhate, afaan baafatee si jaaladhaa dubbatu. Kan danda’ee...
Qabxiilee 12 jaalala cimsan, jireenya midhaagsan
Admin - Dec 12, 2014 0
Jireenyaa fooyyessuufi jaalala mi’eessuun heddu biratti waan haalaan hawwamu; hedduu barbaadamu. Akka salphatti garuu bira gahamaa? Miti, deebiin dhugaa. Garuu, jabaannee irratti hojjanne, xiyyeeffannaa...
Hanga ammaatti ba’aan ulfaayuu fi ulfa irraa ufittisuu kan dubartiiti. Dhiirri dhimmoota lamaan kana woliin hindhiphatan, hincinqaman. Gadaa hanga ammaa keessa jiraane tanatti, seera...
Balaan Kaansarii Qaama Salaatiif [prostate cancer] Saaxilamuu Namoota Wolqunnamtii Dubartii Heddu...
Namoonni jiruu isaanii keessatti wolqunnamtii saalaa dubartii 20 ol woliin qaban carraan isaan dhibee kaansariin qabamuu 28% gadi bu’aadha, jedhu saayinsistoonni Yunivarsiitii Montiriyaal...
Wontoota Dhiirsi Niitii Irraa, Niitiinis Dhiirsa Irraa Arguu Hinfeene
Hundi keenya wontoota amala gaarii jennee lafa kaayanne qabna. Maaltu amala gaariidha, isa kamtu miti kan jedhu wontoota addaa addaa irratti hundaaya. Namaa nama...